Maxaa ka jira in Madaxwayne Farmaajo uu Sucuudiga kala hadlay Arinta Ber-bera ? | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Maxaa ka jira in Madaxwayne Farmaajo uu Sucuudiga kala hadlay Arinta Ber-bera ?
Maxaa ka jira in Madaxwayne Farmaajo uu Sucuudiga kala hadlay Arinta Ber-bera ?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka dalbaday dhex dhexaadnimo ay ka sameyso Sacuudiga sidii ay ugu qancin lahayd dowladda Isku taga Imaaradka Carabta in aysan dhamaystirin saldhig Milateri ay ka dhisato Dekada Barbera ee maamulka Somaliland.
Go’aanka Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa siwayn u taageeraya Xisbiyada Mucaaridka ah ee Maamulka Somaliland iyo Shacabka oo kasoo Horjeeda in dagaal aysan Soomaali Awoodin Loosoo Wareejiyo.
Title: Maxaa ka jira in Madaxwayne Farmaajo uu Sucuudiga kala hadlay Arinta Ber-bera ?